Famonoana mpandraharaha teny Alasora: olona telo mianadahy indray voasambotry ny zandary | NewsMada
Famonoana mpandraharaha teny Alasora: olona telo mianadahy indray voasambotry ny zandary
Saron’ny zandary avy ao amin’ny PA Alasora, ny 12 novambra teo ny lehilahy roa sy vehivavy iray voarohirohy tamin’ny fanafihana sy famonoana mpandraharaha teny Ankadievo-Alasora. Norobaina jiolahy efatra nitondra basy poleta, ny 8 novambra teo, tokony ho tamin’ny 6 ora sy sasany hariva ny entana maromaro toy ny finday sy firavaka, ary vola mitentina 8.900.000 Ar sy vola vahiny, 1000 RNB. Naratra ny mpandraharaha roa teratany malagasy novelesin’ireo jiolahy tamina vy ary namoy ny ainy mihitsy, ny 15 novambra teo, ny iray tamin’izy ireo rehefa teny amin’ny hopitaly.
“Adiny iray taorian’ny fanafihana vao nahazo ny antson’ny sefo fokotany ny zandary ka nandefa ireo zandary efa manao fisafoana amin’ny faritra hafa mba hijery ny zava-misy teny an-toerana no sady nanao fikarohana ireo jiolahy”, hoy ny fanazavan’ny zandary.
Voasambotra teny Ambohijanaka ny vehivavy iray…
Na tara aza anefa vao nandre ny zandary, nisy ihany ny vaovao voaangona amin’ny mombamomba ireo jiolahy ka natomboka ny fitsongoana dia sy fikarohana.
Voarohirohy tamin’izany ny lehilahy iray, mpamatsy akora ho an’ny orinasa ihany ka rehefa nohamarinina tamin’ny antso nataony tamin’ny finday, hita fa teny an-toerana izy nandritra io fotoana nanafihana io. “Hita tamin’izany fitsirihana izany koa ny laharana finday hafa nifampiresaka taminy ka nosamborina teny Ambodiakondro kaominina Ambohijanaka, ny vehivavy iray”, hoy ny zandary.
Naiditra am-ponja vonjimaika eny Antanimora
Nofandrihina kosa tamin’ny alalan’ny antso no nahatonga ny namany iray niara-nanafika taminy ka noraisim-potsiny tsy nanam-po fa efa voasambotra ireo namany.
Naiditra am-ponja vonjy maika eny Antanimora izy telo ireo taorian’ny fanolorana azy teny amin’ny Fampanoavana.
Manentana ny rehetra hiantso avy hatrany ny mpitandro filaminana raha sendra miseho ny fanafihana.